Maniry Hanomboka Ny Fandikàna Ny Fiteninao Amin’ny Informatika Ve Ianao ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 6:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, Español, Português, English
Ady ho an'i Wesnoth (fametrahana an-tsarintany gaelika any Ekaosy). Sary nindramina tamin'ny iGàidhlig.net, © 2017 Ady ho an'i Wesnoth, lisansa GPLv2+.
Navoaka tao amin'ny r12n ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity.
GunChleoc dia Mpiandraikitra ( lehibenà tetikasa) ho an'ilay lalao paikady Widelands sady manampahaizana manokana momba ny rindambaiko maimaimpoana fametrahana ho an-tsarintany.. Ireto ny toroheviny momba ny fanombohana ny fametrahana ho an-tsarintany ho an'ny fitenin'ireo mpiteny vitsivitsy :
7. Mampiasà mpitahiry teny voadika.
Tetikasa maro no adika amin'ny sehatry ny aterineto izay efa manana mpitahiry teny voadika voaforona niaraka taminy, fa azonao ampiasaina ihany koa ny fitaovana maimaim-poana ivelan'ny aterineto toy ny Virtaal na ny Poedit. Indrindra, rehefa manomboka miasa amina tetikasa maro rantsana ianao, ny fanànanao ny zavatra maro ao anaty mpitahiry teny voadikanao dia hanampy anao amin'ny fitazonana ny firindràna sy ny fanafaingànana ny fandikànteny, satria tsy voatery hitendry ny dika teninao ho an'ny “OK” in-jato amin'arivo ianao. Izy roa miaraka no ampiasaiko, nefa tsy adinoko ny misintona ny zavatra rehetra sy mamahana tsy tapaka ny Virtaal.
Topazo maso ny iGàidhlig hahafantarana hoe tahaka ny ahoana ilay tranonkala. Arakaraky ny toerana misy ny fiteninao, ny toromarika momba ny fametrahana ny fitendry sy ny tarehintsoratra dia mety ho ilaina ihany koa. Raha afaka miara-miasa amin'ny olona mahay miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy mahay mivarotra ianao, tsara.